Dɛn Na Ɛba Wɔ Owu Mu?
Owu yɛ nkwa abirabɔ. Owu te sɛ nea obi ada hatee. (Yohane 11:11-14) Awufo nte asɛm, wonhu ade, wɔnkasa, na wonnwen biribiara ho. (Ɔsɛnkafo 9:5, 10) Atoro som kyerɛkyerɛ sɛ awufo kɔ ahonhom wiase bi mu ne wɔn nananom kɔtra. Bible nkyerɛkyerɛ saa.
Wɔn a wɔawuwu ntumi mmoa yɛn, na wontumi mpira yɛn. Nkurɔfo taa yɛ amanne yi mmusu ahorow a wogye di sɛ ɛbɛsɔ wɔn a wɔawuwu no ani. Eyi nsɔ Onyankopɔn ani efisɛ egyina Satan atosɛm no biako so. Ɛrentumi nsɔ awufo nso ani, efisɛ wonni nkwa mu. Ɛnsɛ sɛ yesuro awufo anaa yɛsom wɔn. Ɛsɛ sɛ yɛsom Onyankopɔn nkutoo.—Mateo 4:10.
Awufo bɛtra ase bio. Yehowa benyan awufo aba nkwa mu wɔ paradise asase so. Saa bere no wɔ yɛn anim. (Yohane 5:28, 29; Asomafo no Nnwuma 24:15) Onyankopɔn betumi anyan wɔn a wɔawuwu no te sɛ nea wubetumi anyan obi afi nna mu no ara pɛ.—Marko 5:22, 23, 41, 42.
Adwene a ɛne sɛ yenwu no yɛ atoro a Satan Ɔbonsam ma ɛtrɛw. Satan ne n’adaemone ma nkurɔfo susuw sɛ awufo ahonhom te nkwa mu na wɔma nyarewa ne ɔhaw afoforo ba. Satan daadaa nkurɔfo, ɛtɔ da bi a denam adaeso ne anisoadehu so. Yehowa kasa tia wɔn a wɔbɔ mmɔden sɛ wɔne awufo bɛkasa no.—Deuteronomium 18:10-12.